Kenya oo la dagaallamaysa tuugada laysa duur-joogta - Sabahionline.com
Kenya oo la dagaallamaysa tuugada laysa duur-joogta
Kenya ayaa taabba-galinaysa tab cusub oo ay kula dagaallamayso dadka laaya duur-joogta iyada oo soo iibsanaysa diyaaradaha qumaatiga u kaca oo dheeraad ah isla markaana qoranaysa shaqaalaha ilaaliya duur-joogta, sidaana waxa Arbacadii (9-ka May) sheegay agaasimaha Adeeggyada Ilaalinta Duur-joogta Kenya (KWS) Julisu Kipngetich. Qodobbo la xiriira
Tahriibiye fool-maroodi oo Shiineeys ah oo lagu ganaaxay Kenya
Madaxweynaha Kenya oo ku baaqay in la casriyeeyo Barnaaamijka Dhawridda Bay’adda ee QM
Dadka sida sharci-darrada ah u laaya duur-joogta ayaa sannadkan dilay afar wiyil iyo 70 maroodi, ayuu yiri, isaga oo ku eedeeyay dilka soo badanaya sicirka sii kordhaya ee faan-maroodiga. “Haatan waxannu halkii wiyil u asteeynay in ay laba qof waardiyeeyaan, halka waayihii hore uu qof kaliya ilaalin jiray halkii wiyilba,” ayuu Kipngetich ka sheegay shir-jaraa’id oo uu ku qabtay Nairobi. Qofka dheeraadka ah ee loo asteeyay ilaalinta wiyisha ayaa ogolaan doona in si sahlan loola socdo dhaq-dhaqaaqeeda.
Kipngetich waxa uu sheegay in KWS (Kenya Wildlife Service) ay sare u qaadi doonto ilaalinta ay ku hayso xirmooyinka duur-joogta iyo maddaarada iyada oo helicabtarkii saddexaad ee KWS-na lagu qalabeeyn doono kamarado lagula socdo dhaq-dhaqaaqa dhulka ka jira.
Sannadkii hore, 278 maroodi ayaa la dilay, sida uu qoray wargayska Daily Nation ee Kenya. Bishii horena, ciidamada ilaalada duur-joogta ayaa meel u dhow soohdinta Ugaandha ku dilay shan qof oo looga shakiyay inay ku ugaarsanayeen si sharci-darro ah.